Calanka Ethiopia ma Kala Dooran Kartaa? – Rasaasa News
Aug 4, 2011 Calanka Ethiopia ma Kala Dooran Kartaa?
Xubnaha kooxda Jwxo-shiil, ee uu buufisku Bacda madow u xidhay oo kala doortay halka calanka ee dalka Ethiopia, arintaas oo akhistayaashu ay markhaati ka yihiin Jahawareerka joogtada ah ee haysta afarta kooxda ka hadhay.
Aan isweydiinee maxay xubnahani aaminsan yihiin eegga, maxayse hore u aaminsanaayeen, meherad intee la egg ayeyse bulshada maanta ku dhex leeyihiin. Maanta waxay aaminsan yihiin oo kaliya In ay maro yar meel saaraan, taas oo ayna micnayn karin waxa ay rabto maradu, ku daa dad maati korsi iyo miigashada caydha midowga yurub u jooga.
Wadaad baa bari nin aan diinta ku fiicnayn barayey salaada iyo wayso qaadashada, kolkuu marayo baabka istijada ayuu yidhi raaci farta biyaha si aad u daahirso meesha, ninkii baa wadaadkii su,aal waydiiyey oo yidhi wadaadow hadaa farta Ogolaatay ka kale maxaad ku diidi!.
Micno ma samaynayso in kulan caajis ah oo ka dhacay London khad galiyo, waxaase faalo mudan fadhi xumada sawirka laboda Oromo iyo labada Axmaar ee iyaga oo banaanka jooga arin ku heshiin waayey, intee in la egg ayey wax ku biirin karaan kuwa agg fadhiye ee ay ceebi dhagahooda buux dhaafisay.
Waa aqli sidee ah Oromo wadata calanka Ethiopia waan ogolahay, marka walaalkay wato calanka Ethiopia-na waan ka carari, dadweynaha Somalida Ogadeeniya ma ah wax ay fahmayaan, oo sir baa qarsoon.
Ururada mucaaradka ee Oromada ayey tiradoodu dhantahay 7 kala socota, tayo xumo darteedna in ay dhistaan hal urur way ku heshiin waayeen. Axmaaro waa la mid Canfar hal baa mucaarad ka ah, hadii uu midkood wax noqdana waxba uma ogola Somali.
Shirkii London 1991 ee ururada Ethiopia oo dhan oo hal dalad ah loo qabtay si ay u diyaariyaan jadwalka dawladnimo marka la rido xukuumada Dergiga, ONLF, way diiday waxayna dhiibtay dood macquul ah, oo ahayd mucaarad iyo muxaafid Ethiopia waa Ethiopia mana doonayno in aan wax la wadaagno.
Maanta kuwa Jahawareeray oo jidkii ka lumay waxay aaminsan yihiin, in Mucaaradka Ethiopia heshiis lala yahay, dawlada Ethiopia-na col lala yahay, taas micnaheedu waa mucaarad diidan xukuumada jirta.
ONLF, dadkii waday iyo waxy aaminsanaydba, waxaa ku yimid isbadal waxayna la heshiisay Ethiopia. Maantana waxay ka qayb qaadanaysaa horumarinta, inta ka hadhay ee nabada diidayna waa afar aan qurbaha meela u dhaafi doonin wakhtiga yar ee u dhiman.
Bulshada u dhalatay degaankana meherad kuma dhex leh afarta nabad diid oo way ka dhuuntaan meelaha ay bulshadu isugu timaado.